Alakamisy Febroary 9, 2017 Alakamisy Febroary 9, 2017 Douglas Karr
Tao anatin'izay herinandro vitsivitsy lasa izay, nandinika ny vokatra sy serivisy atolotray ny mpanjifanay izahay. Amin'ny maha masoivohona antsika dia manana ekonomika maridrefy amin'ny fiasa amin'ny fitaovana sy ny fahaizana azontsika zaraina amin'ireo mpanjifa izahay - saingy ireo tombony ireo dia tsy maintsy manome ny sanda fanampiny ilaina handraisana ny vidin'ny masoivoho. Tsy manana fisalasalana kely izahay fa ny mpiasa anatiny dia afaka mampifanaraka ny vokatra azontsika amin'ny fandaniana mitovy amin'ny mpanjifanay. Mbola, ny
Hatramin'izao dia mety efa nahita an'io teny nalaina avy tamin'i Tom Goodwin, filoha lefitra ambony amin'ny tetikady sy fanavaozana ao amin'ny Havas Media io ianao: Uber, ilay orinasa taxi lehibe indrindra manerantany, tsy manana fiara. Facebook, tompona haino aman-jery malaza indrindra manerantany, dia tsy mamorona atiny. Alibaba, mpivarotra antsinjarany faran'izay sarobidy, tsy manana tahiry. Ary Airbnb, mpamatsy trano lehibe indrindra manerantany, tsy manana trano sy tany. Misy orinasa 17 miliara dolara ankehitriny ao amin'ilay antsoina hoe toekarena fiaraha-miasa. Ireo orinasa ireo dia niaina goavana